Caafimaadka iyo Fayo-qabka - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadaagga ah
Bogga ugu weyn/Caafimaadka iyo Fayo-qabka
Caafimaadka iyo Fayo-qabka2022-05-30T19:08:57-04:00
Fayo-qabka / Daryeelka Bulshada
Baaq loogu talagalay Taakuleynta Caafimaadka Maskaxda Horudhaca ah iyo Daryeelka Bulshada ee kooxaha xagjirka ah iyo ururada
Caqli-gal: sheygan wuxuu soo jeedinayaa waxyaabaha soosocda sida runta ah: Inbadan oo naga mid ah khibrad la soo deristay caruurnimada iyo dhallinta waxaanan sii wadaynaa inaan la kulanno jahwareer ku saleysan is-goysyadeenna shaqsiyeed.
Maaddaama bulshooyinka Portland iyo kuwa kaleba ay la tacaalayaan xaqiiqooyinka socda ee rabshadaha booliiska, wadahadalo iyo mashaariic ayaa u soo baxay in laga shaqeeyo la xisaabtanka, aan dulmi ku jirin, iyo beddellada ay bulshada ku hoggaamiso ee ku aaddan ciidamada booliska.
Wadajirka Daryeelka Caafimaadka ee Black Cross
Tilmaamaha Dhaq-dhaqaaqa ee Gargaarka Koowaad ee Aasaasiga ah
Black Cross Health Collective waa koox isku xiran oo ka tirsan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ku nool Portland, Oregon. Waxaan sameysanay kadib mudaaharaadkii WTO maxaa yeelay waxaan aragnay baahi caafimaad oo u gaar ah bulshada xagjirka ah.
Ku-tabarucayaasha Libcom.org iyo Ururka Saxaafadda Yaryar ee Edmonton
Qoraalkan qoraalka ahi wuxuu ka soo baxayaa doodo taxane ah oo ka dhacay goleyaasha libcom.org. Waxaa si isdaba joog ah loo soo qaaday in niyadjabka, cudurada maskaxda, iyo walbahaarka shucuurta ay aad ugu badan yihiin dadka u dhaqdhaqaaqa xoriyadda siyaasada. Intaas waxaa sii dheer, la xanuunsashada jirro maskaxeed sida qof siyaasad firfircoon firfircoon badanaa wuxuu la yimaadaa dhibaatooyinkiisa gaarka ah.
Hel xagjirnimo, xididdada karkarinta: Tilmaamaha Witch Jikada ee Fayo-qabka waqtiga COVID19
Nidaamyadeenna difaaca waxay ku qalabeysan yihiin habab awood leh oo lagula dagaallamo caabuqyada, waxaana jira siyaabo badan oo aan ku taageeri karno kuna horumarin karno awooddan dhalasho.
Sababtoo ah nidaamka daryeelka caafimaad ee xirfad-yaqaanku wuxuu ku wajahan yahay sare u qaadista faa'iidada, halkii laga siin lahaa daryeel macquul ah baahiyaha qof walba, inbadan oo naga mid ah ayaan daryeel u helin meel aan ka ahayn qolka gurmadka.
Kooxda Caafimaadka ee Xoreynta Aagga Boston
Tilmaamaha Daryeelka Street ee Hypothermia
Hypothermia = marka heer kulka jirku hoos u dhaco. Waxyaabaha Halista u ah hypothermia: Qabow, qabow, qoyan, ama cimilo dabeyl leh. Dhar iyo qalab aan habboonayn. Dharka dhagan oo curyaaminaya wareegga dhiigga.
Elise Krohn, Valerie Segrest, Renee Davis, Rhonda Grantham, iyo Sofie Geist
Dhirta Dhiirrigelinta Joogtada iyo Dhiirigelinta: Kheyraadka loogu talagalay Bulshooyinka Qabiilka inta lagu jiro COVID-19
U dhaqida gacmaha sida dhakhtar qalliin. Isaga oo lix fuudh ka fog dadka kale - gaar ahaan Cuqaasha. Jeermiska oogada oo joogsila'aan. Dhammaadka gacan qaadka. Kani waa dunida aan hadda ku nool nahay, waxaana naloo sheegay inay sii socon karto in muddo ah.
Waa Kulul! Waa huur! Waa Cadceed !: Xog ku saabsan kuleylka iyo cudurada la xiriira qorraxda
Ka Hortagga: Faydhaynta. Jidhku wuxuu isku qaboojiyaa dhidid; waxaad ku waayi kartaa ilaa 3 litir oo biyo ah saacadii dhidid. Fuuq-baxa hore wuxuu bixiyaa dareere "barkinta."
La fallaagada En Cuarentena: Una Guía Anarquista de Acción iyo Tiempos de Pandemia
Elija un grupo de personas en las que confíe, preferiblemente personas con quienes compare la vida diaria, con factores de riesgo y niveles de tolerancia al riesgo similares.
Waallida & Wadooyinka Dulmiga ee Isbadalka Shakhsiyeed & Xoreynta Wadajirka ah
Adduunyada shaabadeeya dariiqyada dhinacyada, albaabbada qarsoon iyo godadka dhulka hoostiisa, oo nagu qasbaya dhammaanteen inaan ku soconno dariiqa toosan ee aan tooska ahayn ee loogu yeero wax caadi ah, Mashruuca 'Icarus' wuxuu nasasho u yahay kuwa doonaya inay sahamiyaan farshaxanka luminta.
La-talinta asaaga / macluumaadka dhagaysiga firfircoon iyo laylisyada
Diyaargarowga dagaalka, askarta iyo saraakiisha ayaa sida caadiga ah lagu soo shubaa dagaalkooda, sida ciyaartoyda kubbadda cagta ay iskaga soo baxaan naftooda kahor ciyaarta. Intii lagu guda jiray mudaaharaadkii WTO ee Seattle, dadka u dhaqdhaqaaqa waxay mar dambe maqleen in saraakiisha FBI-da ay booliska u sheegayaan in afar sarkaal ay dhiman doonaan inta ay socdaan mudaharaadyada
Kajawaabida Cadaadiska Dhacdooyinka Halista ah ee Mudaaharaadka iyo Abaabulka Dadweynaha
Cadaadiska shilalka halista ah waxaa sababi kara dhacdooyinka mudaharaadka iyo abaabul wadareedyada sida: adeegsiga xeeladaha argaggixisada (mararka qaarkood si aan kala sooc lahayn) ee booliska, oo ay ku jiraan jirdil, maskax iyo faraxumeyn, waayo aragnimada cabsi daba dheeraatay iyo mid daran, kala soocista asxaabta dhaawacan, galmada dhibaataynta mudaaharaadayaasha kale
Dawada qalalaasaha waa ku dhaqanka dawada jawi cakiran.
Waxay ka jirtaa meel ka baxsan adeegyada caafimaad ee rasmiga ah iyo kuwa Dawladdu fasaxday.
Rx Open waxay bixisaa macluumaad ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee aagagga ay saameeyeen musiibada.
Xiriirka Anarchist Federation
Xirfadaha Badbaadada Kacaanka 1: Qalab Caafimaad oo Dhaawac ah
Waxaan aragnay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay kacdoonkii uu hogaaminayay Madow ee looga soo horjeeday rabshadaha booliiska in dhamaanteen aan la kulmi doono rabshado xad dhaaf ah oo ay geystaan ​​booliska, ilaalada qaranka, qandaraasleyaasha militariga, xubnaha maleeshiyada fashiistaha, iyo kuwa keligood-yeyda ah Maxay tahay shayga kaliya ee aan si wada jir ah u wada qaban karno si aan u hubinno in dhaawacyadeenna la siiyo fursad dagaal oo aan ku noolaano ka dib markii nala soo weeraro? U qaado qalab caafimaad oo loogu talagalay daaweynta dhaawacyada iyo barashada gargaarka degdegga ah ee naxdinta leh.
Awooda Ayaa Ina Buka
Istaraatijiyadaha Taageerada Dareenka Dareenka
Markaad iska caabinayso xoogagga kala duwan ee xukunka, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto cadaadis noocyo badan leh: (booliska) rabshad (ama hanjabaaddeeda),
kormeerka, dambiilenimo, maxbuus, iyo waxyaabo kale. Waa inaan tan u diyaar garowno.
Wadajirka Qoraalka Kacaanka
Tilmaamaha Daawada Waddada
Dhakhaatiirta waddooyinka, ama dhakhaatiirta waxqabadka, ayaa ah mutadawiciin heerar kala duwan oo tababar caafimaad leh oo ka qayb galaya mudaharaadyada iyo bannaanbaxyada si loo bixiyo daryeel caafimaad sida gargaarka degdegga ah.
Caafimaadka Chicago Action
Buugga Tilmaamaha Caafimaadka Waddada
Nidaamyada gargaarka degdegga ah ee qaran ee adduunka intiisa badan ayaa ka soo baxay kooxihii caafimaadka ee dhaqdhaqaaqyadii caanka iyo xorriyadda ee sanadihii 1950-meeyadii iyo 1960-yadii. Dalka Mareykanka, dhakhaatiirta caafimaadka ee waddooyinka ayaa ka shaqeynayay oo tababar ku qaadanayay Mississippi iyo Magaalada New York ugu yaraan afar sano ka hor barnaamijkii ugu horreeyay ee EMS ee gobolka oo dhan laga aasaaso Maryland.
Machadka Daawada Wadada
Xirfadlaha Caafimaadka Dariiqa Inta lagu gudajiro Faafidda cudurka COVID19
Dadka la kulma hoyla'aanta aan la daboolin waxay halis sare ugu jiraan inay u dhintaan COVID19.
Saaxiibbada Safraya: Cudurrada Caadiga ah & Daawooyinka loogu talagalay kuwa waddada ku jira
Trauma iyo Burnout
Firfircoonida Trauma iyo Soo kabashada
Mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee ku saabsan dhaqdhaqaaqayaasha ayaa ah in inta badan aan si ula kac ah nafteena ugu bandhigno naxariis darada markaan aaminino inay lama huraan tahay.
Mashruuca Xaqiiqda Cimilada, et. al.
La Qabsashada Dhibaatada Isbedelka Cimilada
Xaqiiqda isbeddelka cimilada runtii waa mid aad u cabsi badan. Waxaan horeyba ugu jirnay waqtiyadii isbeddelka cimilada ee halista ahaa, iyadoo saadaashu ay ka sii xuntahay haddii aan sii wadno ganacsigeenna sidii caadiga ahayd, ku shubista gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee badan.
Machadka Australia ee Adkaysiga Masiibooyinka
Xirmooyinka Qalabka Trauma ee Bulshada
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay ilo caawiya oo lagu taageerayo dadka waaweyn iyo carruurta ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib masiibada ama dhacdo naxdin leh. Waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto qaar ka mid ah saameynta musiibada iyo sida aad uga caawin karto yareynta saameyntaas.
Gargaarka Koowaad ee Caadifadeed & Cilmi-nafsiyeed
Dulmarka guud ee gargaarka degdegga ah ee shucuur iyo nafsi ahaaneed oo ay ku jiraan ujeeddooyinka aasaasiga ah ee gargaarka degdegga ah ee nafsiga ah, bixinta gargaarka degdegga ah ee cilmu-nafsiga ah, dabeecadaha qaar ee laga fogaado, astaamaha dhagaystayaasha naxariista leh, iyo inbadan.
Maskaxda Caawinaad Koowaad Qeybta 1
Qaybta koowaad ee webinar gargaarka degdegga ah ee shucuurta ah.
Maskaxda Caawinaad Koowaad Qeybta 2
Qeybta labaad ee shabakadda gargaarka degdegga ah ee shucuurta ah.
Maskaxda Caawinaad Koowaad Qeybta 3
Qeybta seddexaad ee webinar gargaarka degdegga ah ee shucuurta ah.
Gundhigga iyo Xarumaha loogu talagalay Dadka Dhaqdhaqaaqayaasha ah
Ficil ahaan, xaalad kasta oo kacsan oo xaalad khatar ah, waxaan u baahanahay inaan awoodno inaan xasilloonaano, aan dareemo cabsigeenna annaga oo aan u oggolaan inay naga adkaato ama isku beddesho argagax. Gundhiggu waa farsamo naga caawin karta inaan feejignaan iyo degganaan ku jirno marka naarta oo dhammu ay ka go'do.
Bogsiinta ficilka: Qalab loogu talagalay Nolosha Madow Maaddada bogsiinta Cadaaladda & Waxqabadka tooska ah
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, dad aad u tiro badan oo ka mid ah dadkeennu waxay ku maqnaayeen waddooyinka, iyagoo ku kacaya ficil toos ah oo xoog badan oo lagama maarmaan ah, una dagaallamaya nolosha dadkeenna.
Khariidadaha Mad ee Musiibada
Waqtigan waa xilli adag, inteena badanna waxaa saaran cadaadis aad u weyn. Waxaa laga yaabaa inaan la kulanno go'doomin, jirro, dakhli lumis, cabsi u qabta kuwa la jecel yahay, lumitaanka kuwa aad jeceshahay, walaac, iyo xaalado kale oo badan oo xanuun badan.
Wadajirka Caafimaadka: Shaqada Caafimaadka ee Iskeed u shaqeysa sida Is-difaacid marka loo eego masiibooyinka iyo halganka bulshada
Daawada wadadu waxay leedahay xidido kacaan iyo hal-abuur cusub oo bilaabmaya iyo
iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah oo lagu sii waday mabda 'ahaan
is caawinta iyo isdifaacida iyadoo loo marayo Madow Madow, Hindida Mareykanka
Dhaqdhaqaaqa, dhaqdhaqaaqyada difaaca dhulka, abaabulka iska caabinta Guerilla
iyo halganka kale ee xoreynta ficil toos ah.
Jawaabayaasha Koowaad Dhibaatada Caafimaadka Maskaxda
Webinar ka jawaab celinta dhibaatada caafimaadka maskaxda.
Wadajirka Jane Adams
Ka Hortagga Burburinta
Maxay shaqsiyaadka ka qaban karaan gubashada? Aynu ku bilowno ka hortagga aasaasiga ah. Tan macnaheedu waa waxyaabaha ka caawin kara qof walba inuu ka hortago gubashada. Halkan waxaan diiradda ku saarnaa dabeecadaha xoojinta adkeysiga.
Shabakadda Cadaadiska Xanuunka Dhallaanka ee Qaranka
Gargaarka Degdegga ah ee Cilmi-nafsiga ee Dugsiyada Hagaha Hawlaha Goobta
Qaybta badbaadada dugsiga iyo maareynta xaaladaha degdegga ah ayaa si weyn u horumaray tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxaa naxdin leh, falalka rabshadaha, masiibooyinka dabiiciga ah, iyo weerarada argagixisanimo waxay na bareen casharro badan. Waxaan sidoo kale ognahay in noocyada kale ee xaaladaha degdega ah ay saameyn ku yeelan karaan dugsiyada, oo ay ku jiraan xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka, shilalka gaadiidka, dhaawacyada isboortiga, dhibanayaasha asaaga ah, xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha, iyo dhimashada degdega ah ee xubin ka mid ah bulshada dugsiga.
Ururka Caafimaadka Adduunka, et. al.
Gargaarka koowaad ee cilmu-nafsiga: Tusaha shaqaalaha goobta ka shaqeeya
Markii waxyaabo xun ay ka dhacaan bulshooyinkeenna, waddamadeenna iyo adduunkaba, waxaan dooneynaa inaan gacan u fidino kuwa ay dhibaatadu saameysey. Tilmaamahan wuxuu daboolayaa gargaarka degdegga ah ee nafsaaniga ah kaas oo ku lug leh bani'aadamnimo, taageero iyo caawimaad wax ku ool ah oo loo fidiyo dadka kale ee bini'aadamka ah ee la kulmaya dhacdooyinka dhibaatooyinka culus.
Xirfad Maskaxeed: Sare u kac Adigoon Guban
Waxa aad gacanta ku haysaa waa qalab adag oo ka kooban fikradaha iyo aragtida
waxaana loola jeedaa in la wadaago oo laga wada hadlo loona isticmaalo ficil ahaan sida
Dhaqdhaqaaqa mashquulka ayaa isbeddelaya.
Daaweynta Wadada: Joogsiga Caloosha ee Ficil
Webinar ku saabsan daaweynta waddada
Firfircoonaanta Joogtaynta iyo Ka fogaanshaha Burburinta
Gubashada waa arrin siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq. Sannad kasta dhaqdhaqaaqayaasha u heellan waxyeellada iyo ka tagista beesheena maxaa yeelay way gubteen.
Aad ayey u adag tahay in la sameeyo waqti dheer oo wada shaqeyn adag ah la'aanteed
dareemid daal ahaan.
Dhaawaca iyo farshaxanka farshaxanka farshaxanka ee CAMs
Guudmarka Dhibaatada: Calaamadaha iyo Bogsashada
Kuwani waa waxyaabaha dadku u baahan yihiin inay ka ogaadaan dhaawacyada si dhakhso leh u bogsada ama u diyaargaroobaan maskax ahaan ama ugu yaraan inay ogaadaan in hawsha la og yahay oo dhaawacana la bogsado.
Fahmitaanka iyo Wax ka Qabashada Dhibaatada Murugada
Dadku waxay go'aansadaan inay noqdaan shaqaale samafal sababo badan oo kala duwan awgood. Qaarkood waxay u yimaadaan shaqadan sababtoo ah u heellan shaqsiyadeed ee isbeddelka bulshada - laga yaabee inay raacaan waddo ruuxi ah ama inay fuliyaan wicitaan.
Dulmarka guud ee dhaawaca soo gaadhay, waxa uu yahay, sababaha halista ah, calaamadaha iyo astaamaha, iyo siyaabaha wax looga qabto dhaawacyada soo noqnoqda,
Fahamka iyo La Qabsashada Dhibaatada Murugada
Shaqaalaha samafalku waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro badan. Waxay ka shaqeeyaan dib u soo kabashada iyo hawlgallada gargaarka, waxbarashada, tababarka caafimaadka, gargaarka beeraha, abaabulka bulshada, horumarinta dhaqaalaha, biyaha iyo fayadhowrka, xallinta khilaafaadka, iyo u doodista.
Ka mudaaharaada Tababarka Caafimaadka iyo Badbaadada oo uu lasocdo Turjubaan ASL ah
Ka mudaaharaada webinar tababarka caafimaadka iyo badbaadada
Beddelka Beesha ee 911
Street Webinar ee Wadada
Kani waa duubis toos ah oo Webinar ah oo ay soo bandhigtay Juun 3, 2020 oo ay soo bandhigtay Bedelaadaha Beesha ee 911.
Shabakada Daaweynta Denver Action
Tababarka Caafimaadka iyo Amniga
Waxqabadka webinar ee tababarka caafimaadka iyo badbaadada
Isbaheysi Waxyeello Leh Ha Sameynin
Tabobarka Street Bridge Bridge ee Xirfadlayaasha Caafimaadka
Wadada tababarka tababarka buundada Street ee xirfadlayaasha caafimaadka